Faah faahin:- Deeqo Diraac oo ku geeriyootay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Deeqo Diraac oo ku geeriyootay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho
Isbitaal ku dhex yaalla xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku geeriyootay haweeney lagu magacaabi jiray Deeqo Diraac, oo 29-kii bisha June ee sanadkii 2014-ka ay maxkamadda ciidanka qalabka sida ku xukuntay 15 sano oo xarig ah.
Marxuum Deeqo Diraac ayaa lagu soo eedeeyay inay gacan ka geysatay dil naxdin leh oo loo geystay Allaha u naxariistee Nafiso Cismaan Salaad oo 20-jir ahayd, islamarkaana ka baxday mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, waxaa Deeqo Diraac xilligaasi lala xukumay labo nin kale ee dilka geystay, kuwaas oo kala ahaa Xasan Maxamad Cabdi iyo Shaafici Cabdi Xirsi, iyadoona markii dambe xukunka dil ah lagu fulliyay.
Dhinaca kale, maamulka xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo faah-faahin ka bixiyay sidii ay Deeqo Diraac u geeriyootay ayaa sheegay inay muddo 45-cisho ah ay ku xanuunsaneysay isbitaal ku dhex yaalla xabsigaas.
Ugu dambeyntii, maamulka xabsiga dhexe ayaa sheegay in Deeqo Diraac uu haayay xanuunka kaadi-macaanka, iyadoona taasi ay keentay inay ugu dambeyn xanuunkaasi u geeriyooto.